ကှနျကရဈလောငျးရာတှငျသိထားသငျ့သညျ့အခကျြမြား(၂) - Myanmar Builders Guide
concrete projects ကွီးမြားကို မှနျကနျစှာဆောငျရှကျနိုငျရနျ အခွခေံသဘောတရား ၁၂ ခကျြထဲမှ (၆) ခကျြကိုထပျမံဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Screed လုပျသညျဆိုသညျမှာ ပါရာတုနျးကလေးတပေေးပွီးမှ နံရံမှာ ပလာစတာကပျပွီး ခြောခွငျး၊ topping လောငျးခွငျးဖွဈပါသညျ။
ထို့အပွငျ သဈသားခြောငျးဘေး၂ဖကျခံပွီး အလယျကှနျကရဈကို ပတျတနျးဖွငျ့ရိုကျရပါသညျ။
သဈသားခြောငျးအစား aluminium square pipe မြား၊ hollow pipe မြားကိုလညျးအသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
အငျဂငျြနီယာမြားသညထိုပါရာတုနျးမြား၊ ပတျတနျးမြားကို စိတျဝငျစားရငျ စိတျဝငျစားသလို၊အလုပျသမားမြားကလညျး
လကျရာကောငျးကို ရရှိနိုငျသညျ့အပွငျ ကုနျကစြရိတျကိုလညျးမြားစှာလြှော့ခနြိုငျပါသညျ။
8. Trowelling -လကျပှတျနဲ့ ဖိသိပျခြောပါ။
ထို့နောကျ cover guide rail ကိုအမှီပွု ပွီးမဉျြးတနျနဲ့ ရိုကျတုနျးနဲ့ ရိုကျညှိ ဆှဲရပါမညျ။
ထိုအခါ level အလိုကျcompacted ကွမျးခြောရပါမညျ။
ထို level အလိုကျကွမျးခြောကို ခြောညကျသှားရနျနှငျ့ compaction ထပျရရနျအတှကျ လကျပှတျနဲ့ ဖိသိပျဆှဲဖှတျလုပျရပါ့မညျ။
ထိုအခွအေနသေညျအလှနျလကျဝငျသညျ့အတှကျ ကှနျကရဈမအိပျခငျ ပွီးအောငျလုပျဖို့ သှကျသှကျလုပျဖို့လိုပါသညျ။
Floating process - လကျပှတျနဲ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျတဲ့အခါ လုပျငနျးစဉျ ၂ - မြိုးရှိပါတယျ။ ပထမ တခုကတော့ bull float လို့ချေါသညျ့ လကျပှတျကွီးနဲ့ပှတျခွငျးဖွဈပါသညျ။
ရညျရှယျခကျြမှာ course aggregate မြားကို အောကျသို့ရောကျသှားအောငျ ရိုကျခလြိုကျပွီး အပျေါကို အနှဈတကျလာအောငျ ဖွဈပါတယျ။
bull float ကို ဆှဲတဲ့အခါ မိမိဘကျကို ကွှစပွေီး၊ တှနျးတဲ့အခါ ရှဘေ့ကျကို ကွှစမှောဖွဈပါတယျ။
magnesium hand float သညျလုပျရကိုငျရ အဆငျပွပေါတယျ။ ထို bull float ကွီးနဲ့ ခြောညှိပွီးတဲ့နောကျတှငျ
water bleeding ဖွဈလာသညျ့အခါ၊ hand float နှငျ့ တံမကျြစညျး လှဲသလို လှဲပွီး ထှကျလာသညျ့ရတှေကေို
Rebar မပါသော၊ ကှနျကရဈကွမျးခငျးမြားခငျးတဲ့အခါ၊ ကှဲတတျသောကွောငျ့ groover ဖွငျ့ ၅ပေ လောကျ ၆ပေ လောကျ
ကှနျကရဈအထူအပါးပျေါမူတညျပွီး ခွားခွားပွီး ဖွတျပေးရပါမညျ။
ကှနျကရဈလမျးမှာတော့အထူ ၈-လကျမလောကျ ရှိသညျ့အတှကျ ၂၅ - ပလြှေငျ contraction joint တခုစီနှငျ့
ပေ ၁၀၀ လြှငျ expension joint တခုစီ ထညျ့ကွပါသညျ။
groover နဲ့ခှဲသညျ့အခါ ညီညီညာညာ ကွညျ့ကောငျးစရေနျသဈဖွငျ့ဖွဈစေ၊ အလူမီနီယံနဲ့ဖွဈစေ ပွုလုပျထားသော
straight edge နဲ့ ဖိပွီးမှ ခှဲရပါ့မညျ။ ကှနျကရဈထုရဲ့ ၄ပုံ ၁ပုံ နကျအောငျ ခှဲပေးရမှာဖွဈပွီး အပူအအေးပွောငျးလဲပါက
ကှနျကရဈကှဲသညျ့အခါ ထိုနရောက ကှဲအောငျ စီမံထားသညျ့အတှကျ control joint လို့ချေါခွငျးဖွဈပါသညျ။
contraction joint ဆိုသညျမှာအေးရငျကှဲဖို့ဖွဈပွီး၊ expension joint ဆိုတာ ပူရငျဆနျ့ဖို့ ဖွဈပါတယျ။
10. Create traction -
ထိုသို့ လှညျးကငျြပုံဖျောထားခွငျးဖွငျ့ မိုးရာသီတှငျ ကှနျကရဈကွမျးခငျးမြား ရေ စိုသောအခါ ခခြေျောခွငျး မဖွဈနိုငျတော့ပါ။
နဲနဲသာ ကွမျတမျးသော မကျြနှာပွငျကို အလိုရှိပါက soft brush - ဘရပျပြော့ပြော့လေးကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
မကျြနှာပွငျခြောခြောကို အလိုရှိပါက သံလကျပှတျဖွငျ့ ဝိုကျပွီး တော့ပှတျပေးနိုငျပါသညျ။
မကျြနှာပွငျမှာ ရတေငျနလေို့ groove - ဂြိုငျ့မွောငျးကလေးမြား ဆှဲမညျဆိုပါကသိပျအနကျကွီးမဆှဲရပါဘူး။
တံမွတျလှဲတဲ့အခါ ကြောကျစရဈခဲမြားပါမလာအောငျ အခြိနျမစောငျ့ဘဲ လောပွီးတော့မလှဲသငျ့ပါဘူး။
ထိုသို့ကြောကျစရဈခဲမြားပါလာမညျပါက magnesium floater လကျပှတျနဲ့ ပွနျခြောပွီးမှ အခြိနျနဲနဲ ထပျစောငျ့ပွီး တံမွတျလှဲပုံဖျောရမညျဖွဈသညျ။
curing အမြိုးမြိုးရှိသညျ့အနကျရလေောငျးပွီး curing ပွုလုပျမညျဆိုပါကကှနျကရဈသှနျးလောငျးပွီးနောကျ ၂၈ - ရကျ အထိပွုလုပျသငျ့ပါသညျ။
သို့သျောလညျး ၇ ရကျတောငျ အနိုငျနိုငျ ရလေောငျးပွီး curing ပွုလုပျကွပါသညျ။
မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ ကှနျကရဈလောငျးပွီးပွီးခွငျးမညျ့သညျ့အခြိနျတှငျ ဦးစှာ curing ပွု လုပျမညျဟု ဆုံးဖွတျခွငျးသညျ အရေးကွီးပါသညျ။
ပညာရှငျပီပီ ဆောငျရှကျခှငျ့ရသော လုပျငနျးမြားတှငျ၊ အထဲကရကေလညျး အပွငျထှကျမသှားစသေော အပွငျကရကေ လညျး အထဲ ဝငျမလာစနေိုငျသော၊
sealing - ချေါ၊ ရလေုံစတေပျသော၊ အတားအဆီးကို၊ ကှနျကရဈ သှနျးလောငျးပွီးလြှငျပွီးခွငျးစောလငျြစှာဆောငျရှကျနိုငျခွငျး
လောငျးထားသောကှနျကရဈသညျကောငျးမှနျနပေါကပွု ပွငျထိနျးသိမျးဖို့ လိုအပျပါသညျ။
အနညျးဆုံးတော့ ဆပျပွာရညျဖွငျ့ပှတျတိုကျဆေးကွောပေးခွငျးဖွငျ့သနျ့ရှငျးသပျရပျသညျ့ ကှနျကရဈကွမျးခငျးကို မွငျရတှရေ့မညျဖွဈပါသညျ။
၅ - နှဈတကွိမျလောကျ seal coat တငျပေးမညျဆိုပါက ကှနျကရဈအသားထညျပကျြစီးခွငျးကို ကာကှယျနိုငျပါသညျ။
concrete projects ကြီးများကို မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခြေခံသဘောတရား ၁၂ ချက်ထဲမှ (၆) ချက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Screed လုပ်သည်ဆိုသည်မှာ ပါရာတုန်းကလေးတေပေးပြီးမှ နံရံမှာ ပလာစတာကပ်ပြီး ချောခြင်း၊ topping လောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် သစ်သားချောင်းဘေး၂ဖက်ခံပြီး အလယ်ကွန်ကရစ်ကို ပတ်တန်းဖြင့်ရိုက်ရပါသည်။
သစ်သားချောင်းအစား aluminium square pipe များ၊ hollow pipe များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသညထိုပါရာတုန်းများ၊ ပတ်တန်းများကို စိတ်ဝင်စားရင် စိတ်ဝင်စားသလို၊ အလုပ်သမားများကလည်း ကျွမ်းကျင်လျှင်ကျွမ်းကျင်သလို ကွန်ကရစ်ကြမ်းသည့်စံချိန်စံညွန်းပြည့်မှီပြီး လက်ရာကောင်းကို ရရှိနိုင်သည့်အပြင် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းများစွာလျှော့ချနိုင်ပါသည်။
8. Trowelling -လက်ပွတ်နဲ့ ဖိသိပ်ချောပါ။
ထို့နောက် cover guide rail ကိုအမှီပြု ပြီးမျဉ်းတန်နဲ့ ရိုက်တုန်းနဲ့ ရိုက်ညှိ ဆွဲရပါမည်။
ထိုအခါ level အလိုက်compacted ကြမ်းချောရပါမည်။
ထို level အလိုက်ကြမ်းချောကို ချောညက်သွားရန်နှင့် compaction ထပ်ရရန်အတွက် လက်ပွတ်နဲ့ ဖိသိပ်ဆွဲဖွတ်လုပ်ရပါ့မည်။
ထိုအခြေအနေသည်အလွန်လက်ဝင်သည့်အတွက် ကွန်ကရစ်မအိပ်ခင် ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ သွက်သွက်လုပ်ဖို့လိုပါသည်။
Floating process - လက်ပွတ်နဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါ လုပ်ငန်းစဉ် ၂ - မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမ တခုကတော့ bull float လို့ခေါ်သည့် လက်ပွတ်ကြီးနဲ့ပွတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ course aggregate များကို အောက်သို့ရောက်သွားအောင် ရိုက်ချလိုက်ပြီး အပေါ်ကို အနှစ်တက်လာအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ bull float ကို ဆွဲတဲ့အခါ မိမိဘက်ကို ကြွစေပြီး၊ တွန်းတဲ့အခါ ရှေ့ဘက်ကို ကြွစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
magnesium hand float သည်လုပ်ရကိုင်ရ အဆင်ပြေပါတယ်။ ထို bull float ကြီးနဲ့ ချောညှိပြီးတဲ့နောက်တွင် water bleeding ဖြစ်လာသည့်အခါ၊ hand float နှင့် တံမျက်စည်း လှဲသလို လှဲပြီး ထွက်လာသည့်ရေတွေကို လိုချင်သည့်နေရာရောက်အောင်ပွတ်ရမည် ဖြစ်သည်။
Rebar မပါသော၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းများခင်းတဲ့အခါ၊ ကွဲတတ်သောကြောင့် groover ဖြင့် ၅ပေ လောက် ၆ပေ လောက် ကွန်ကရစ်အထူအပါးပေါ်မူတည်ပြီး ခြားခြားပြီး ဖြတ်ပေးရပါမည်။
ကွန်ကရစ်လမ်းမှာတော့အထူ ၈-လက်မလောက် ရှိသည့်အတွက် ၂၅ - ပေလျှင် contraction joint တခုစီနှင့် ပေ ၁၀၀ လျှင် expension joint တခုစီ ထည့်ကြပါသည်။
groover နဲ့ခွဲသည့်အခါ ညီညီညာညာ ကြည့်ကောင်းစေရန်သစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလူမီနီယံနဲ့ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ထားသော straight edge နဲ့ ဖိပြီးမှ ခွဲရပါ့မည်။ ကွန်ကရစ်ထုရဲ့ ၄ပုံ ၁ပုံ နက်အောင် ခွဲပေးရမှာဖြစ်ပြီး အပူအအေးပြောင်းလဲပါက ကွန်ကရစ်ကွဲသည့်အခါ ထိုနေရာက ကွဲအောင် စီမံထားသည့်အတွက် control joint လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
contraction joint ဆိုသည်မှာအေးရင်ကွဲဖို့ဖြစ်ပြီး၊ expension joint ဆိုတာ ပူရင်ဆန့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တံမြတ်စည်းတစ်ချောင်းဖြင့်ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်တွင်မိမိနှစ်သက်ရာ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးပေါ်လာအောင်ပုံဖော်လှည်းကျင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ လှည်းကျင်ပုံဖော်ထားခြင်းဖြင့် မိုးရာသီတွင် ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းများ ရေ စိုသောအခါ ချေချော်ခြင်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ နဲနဲသာ ကြမ်တမ်းသော မျက်နှာပြင်ကို အလိုရှိပါက soft brush - ဘရပ်ပျော့ပျော့လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ချောချောကို အလိုရှိပါက သံလက်ပွတ်ဖြင့် ဝိုက်ပြီး တော့ပွတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်မှာ ရေတင်နေလို့ groove - ဂျိုင့်မြောင်းကလေးများ ဆွဲမည်ဆိုပါကသိပ်အနက်ကြီးမဆွဲရပါဘူး။ တံမြတ်လှဲတဲ့အခါ ကျောက်စရစ်ခဲများပါမလာအောင် အချိန်မစောင့်ဘဲ လောပြီးတော့မလှဲသင့်ပါဘူး။ ထိုသို့ကျောက်စရစ်ခဲများပါလာမည်ပါက magnesium floater လက်ပွတ်နဲ့ ပြန်ချောပြီးမှ အချိန်နဲနဲ ထပ်စောင့်ပြီး တံမြတ်လှဲပုံဖော်ရမည်ဖြစ်သည်။
curing အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက်ရေလောင်းပြီး curing ပြုလုပ်မည်ဆိုပါကကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းပြီးနောက် ၂၈ - ရက် အထိပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ၇ ရက်တောင် အနိုင်နိုင် ရေလောင်းပြီး curing ပြုလုပ်ကြပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကွန်ကရစ်လောင်းပြီးပြီးခြင်းမည့်သည့်အချိန်တွင် ဦးစွာ curing ပြု လုပ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။ ပညာရှင်ပီပီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသော လုပ်ငန်းများတွင်၊ အထဲကရေကလည်း အပြင်ထွက်မသွားစေသော အပြင်ကရေက လည်း အထဲ ဝင်မလာစေနိုင်သော၊ sealing - ခေါ်၊ ရေလုံစေတပ်သော၊ အတားအဆီးကို၊ ကွန်ကရစ် သွန်းလောင်းပြီးလျှင်ပြီးခြင်းစောလျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
လောင်းထားသောကွန်ကရစ်သည်ကောင်းမွန်နေပါကပြု ပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အနည်းဆုံးတော့ ဆပ်ပြာရည်ဖြင့်ပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးခြင်းဖြင့်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သည့် ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းကို မြင်ရတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅ - နှစ်တကြိမ်လောက် seal coat တင်ပေးမည်ဆိုပါက ကွန်ကရစ်အသားထည်ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Read 587 times	Last modified on Monday, 03 February 2020 16:58